ဝင်လာနေသော နိုင်ငံခြားငွေများ ကျပ်ငွေဈေးကို ခြိမ်းခြောက် | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 20, 2013 | Hits:40,945
10 | | ဗဟိုဘဏ်က အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ်ငွေ ၈၈၀ နှင့် ၈၆၆ ကျပ်အကြား ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း သတ်မှတ်ထားသည် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ (FDI)နှင့်အမေရိကန် အစိုးရ၏ပျော့ပျောင်းသော ငွေကြေးမူဝါဒများက မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကို ခြိမ်းခြောက်နေသောကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းနေကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယမန်နေ့ နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန် ၀န်ကြီးဌာန၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုစဉ် ဦးဝင်းရှိန်က အထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၀င်ရောက်မှု များပြားလာခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေ စီးဝင်မှု များပြားလာနေသည့်အပြင် အခြားတဖက်တွင်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် ပျော့ပျောင်းသော ငွေကြေးမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း၊ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတက်မှုကို အစိုးရက မျက်ခြေအပြတ်မခံစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က နေ့စဉ် ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း ထုတ်ပြန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဦးဝင်းရှိန်က ဆိုသည်။
“ငွေကြေးမူဝါဒရဲ့အဓိက ရည်မှန်းချက်က ကုန်ဈေးနှုန်းများ တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု Growth with stability ကိုရရှိရန် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး မြင့်မားနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မြင့်မားနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှာ ပြည်ပကနေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားငွေစီးဝင်မှုများပြားနေတာနဲ့အတူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ၎င်းရဲ့ စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာနိုင်ရန် ပျော့ပျောင်းတဲ့ငွေကြေးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးက အခြားသော နိုင်ငံများရဲ့ငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ရာမှာ တန်ဖိုး လျော့ကျနေပါတယ်။ ထို့အတူပဲ အခြား ငွေကြေးတန်ဖိုး မြင့်မားလာခြင်းနည်းတူ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး မြင့်မားလာနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းရှိန်က ဆိုသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးစနစ်တခုလုံး၏ ၀ယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားအပေါ် အမှန်တကယ်ထင်ဟတ် စေသော နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ဈေးကွက်ပေါ်ထွန်းရေး စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားငွေကန့်သတ်ချက်နှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော ငွေလဲနှုန်းဖြစ်ပေါ်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေအခြေအနေကို မျက်ခြေအပြတ်မခံဘဲ စောင့်ကြည့်နေကြောင်း ဦးဝင်းရှိန်က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
စီးပွားရေးပညာရှင်များကမူ အစိုးရ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှာ လိုအပ်ချက်များရှိနေပြီး လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲနှုန်းမှာမူ အမှန်တကယ် စီးပွားရေးကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ စီးပွားရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်နေရာတွင် ပီပြင်သော မူဝါဒများ ထပ်မံချမှတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် အငြိမ်းစား ဘောဂဗေဒပါမောက္ခ ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုးက လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲနှုန်းသည် ငြိမ်သက်နေသော ငွေလဲနှုန်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုမှာ ရပ်တန့်နေကြောင်း၊ လက်ရှိ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးမြင့်တက်သည်ဟုလည်း မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုအရှိန် အဟုန်မြှင့်တင်ရန် ပီပြင်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသည်ဟု ဆိုသည်။
“ငွေတန်ဖိုး တက်တယ်၊ မာတယ်ဆိုတာက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ကျသွားရမယ်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးလာမှ ငွေတန်ဖိုးတက်တယ်၊ မာတယ်ပေါ့။ ဒီလိုပြောလို့ရမှာ။ လက်ရှိငွေလဲနှုန်းက စီးပွားရေးတွေ အားလုံးငြိမ်နေလို့ ဖြစ်နေတဲ့ ငွေလဲနှုန်းပဲ။ ငြိမ်တယ်ဆိုတာ လှုပ်ရှားမှုမရှိလို့ ငြိမ်နေတဲ့ ငွေလဲနှုန်းကို ပြောတာ။ တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အခုအချိန်အထိကို စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက တကယ့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ထင်ဟပ်မှု မရှိသေးဘူး။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းနေတယ်” ဟု ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုးက ဆိုသည်။
စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုကမူ လက်ရှိအချိန်အထိ အစိုးရသည် FEC ငွေကြေးကို ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသေး သည့်အပြင် နီးစပ်ရာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသော ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်ကို တွင်ကျယ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။
“FEC အပြည့်အ၀ မဖျက်သေးရဘူး။ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကလည်း ရှိနေသေးတယ်။ လက်ရှိငွေလဲနှုန်းက Managed Floating အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေး မပီပြင်တဲ့အတွက် ခရိုနီစီးပွားရေးက ကြီးစိုးနေတယ်။ တန်းတူညီမျှ အပြိုင်အဆိုင် ခွင့်ပြုတဲ့ စီးပွားရေးပုံစံကို မဖြစ်သေးဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လက်ရှိ စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ ငွေလဲနှုန်းက အစစ်အမှန် မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်” ဟု ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ်ငွေ ၈၅၀ နှင့် ၈၆၆ ကျပ်အကြား ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း သတ်မှတ်ထားသည်။
မြန်မာငွေနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်းထားသည် မြန်မာ့ရေထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုများပြီး မြန်မာငွေတန်ဖိုး အလွန်မြင့်တက်စဉ်က ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအများစု အရှုံးပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကသာ ရေထွက်ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အများစုမှာ အကြွေးတင် ဘ၀ပျက်ဖြစ်နေရကြောင်း၊ ယခု အမေရိကန်တဒေါ်လာ မြန်မာငွေ ၈၅၀ ကျပ်ဝန်းကျင်မှာ ရေထွက်လုပ်ငန်း များ လုပ်သာကိုင်သာရှိသော်လည်း အရင်းအနှီး မရှိသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်က ရှင်းပြသည်။
“တကယ်လို့သာ မြန်မာငွေတန်ဖိုးထပ်ပြီး ပြန်တက်လာရင် လုပ်ငန်းတွေရှုံးကြဦးမှာပဲ။ အခု လုပ်ငန်းပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျပ်ငွေတန်ဖိုးတက်တုန်းက အကြွေးတွေ တင်ပြီး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အစိုးရကိုတော့ အရင်းအနှီးထုတ်ပေးဖို့ တင်ပြထားတာရှိတယ်။ သူတို့ကလည်း နိုင်ငံခြားအကူအညီရရင် ကူညီမယ်ပြောတယ်” ဟု ဦးသန်းလွင်က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်ကမူ ငွေလဲနှုန်းတွင် မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးမြင့်တက်နေရခြင်း အကြောင်းအရင်းများတွင် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားငွေများ ၀င်ရောက်မှုကလည်း အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“တကယ်တော့ ဘိန်းရောင်းလို့ရတဲ့ငွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းလို့ရတဲ့ဒေါ်လာတွေကလည်း တရားမ၀င် ၀င်နေတာပဲ။ တရားဝင်သာ စာရင်းမရှိတာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက ဘိန်းအထွက် အများဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါနေတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးက ရတဲ့ ဒေါ်လာတွေကြောင့်လည်း ငွေလဲနှုန်းပေါ်ကို အများကြီးသက်ရောက်မှုရှိတယ်” ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ရှင်းပြသည်။
ယခင်စစ်အစိုးရခေတ်က အမေရိကန်တဒေါ်လာလျှင် မြန်မာငွေ ခြောက်ကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကျပ်ငွေတထောင်ကျော်ဈေးပေါက်ခဲ့သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကို နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ် ခွင့်လိုင်စင်များ စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် တဒေါ်လာ ခြောက်ကျပ်စနစ်ကို တရားဝင်ပယ်ဖျက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က နေ့စဉ် ရည်ညွန်း ငွေလဲနှုန်း ထုတ်ပြန်သောစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယခုအခါ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအပြင် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို လည်း နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးပြီး ငွေလဲစင်တာများ စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိရသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment K Z Y Htun February 20, 2013 - 8:08 pm	Not all the FDI supports the country’s economy. Especially in retail sector, FDI in retail sector will lead to loss of jobs….
Reply	ရာဇာ February 20, 2013 - 8:36 pm	သူတို့တွေလဲ အိတ်ဖောင်းလို့ လျှံကျတော့ မှဘဲ ၁ ဒေါ်လာ ၆ ကျပ်ဈေးကို ဖျက်တော့တယ်…အရင်တုံးကတော့ ဓါတ်ငွေ့ သစ် နဲ့ ကျောက်မျက် ရောင်းလို့ ရတဲ့ ဒေါ်လာတွေ ကိုကျတော့ အစိုးရ ရဲ့ ငွေစာရင်းက ကျပ်ငွေ နဲပ ဖြစ်လို့ ၁ ဒေါ်လာ ကို ၆ ကျပ်နဲ့ တွက်ပြီး အစိုးရ ထဲပြန်ထဲ့ကြတယ်….ဒေါ်လာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်တွေထဲ ရောက်သွားရော…ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ကျပ်ငွေ ၆၀၀ ဘဲ ပေးရတယ်လေ…ဒေါ်လာ တစ်သန်း ကို ကျပ်ငွေ သိန်း ၆၀ နဲ့ လဲလို့ ရမှတော့ သိန်း၆၀၀ ပေးရင် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရပြီလေ…ဒါကြောင့် သူတို့တွေ ဒေါ်လာ သန်းချီပြီး ချမ်းသာနေတာ မဆန်းပါဘူး….
Reply	Shwe Thway February 20, 2013 - 11:49 pm	The good sign to bring back solid financial system. In the past, Burmese currency is no more thanapaper. It is even worthless than toilet tissue in abroad.
Reply	ml February 21, 2013 - 3:43 am	မြန်မာငွေ တန်ဘိုးတက်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ငွေလဲနှုန်း ကျပေမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်းကမှ မကျတာ။ ငွေလဲနှုန်းမှာ ၈၅၀ အောက်ရောက်သွားရင် ပြည်ပမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ပြည်တွင်းက မိဘ၊ မိသားစုကို ထောက်ပန့်နေသူတွေ အခက်တွေ့ကုန်မယ်။
Reply	မင်းကြီးညို February 23, 2013 - 6:57 pm	မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဘိုးတက်မှဖြစ်မှာပါ။ ကျပ်ငွေတန်ဘိုးတက်နေစဉ်က မြန်မာကျပ် ၁၀၀၀ ကို
တရုတ်ယွမ် ၈ ယွမ်ထိ ရခဲ့ဘူးတယ်။ အခုဆိုရင် ၇ယွမ် ၂၉ပြားပဲ ရတော့တယ်။ အလားတူပဲ
ကျပ် ၁၀၀ ကို ထိုင်းဘတ် ၄ ဘတ်ကျော်ထိ ရှိလာခဲ့ရာမှ အခု ၃ ဘတ် ပြား ၄၀ ပဲရှိတော့တယ်
ကျပ်ငွေဖောင်းပွ လာတဲ့သဘောပါ။ ကျပ်ငွေတန်ဘိုးကျအောင် တမင်မလုပ်သင့်ပါ။ သူ့ရဲ့ပကတိ
အမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စကားကိုနားဝင်ပြီး အစိုးရမှကျပ်ငွေ
တန်ဘိုးကျအောင် တမင် မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။
Reply	mgmgaye March 2, 2013 - 9:00 am	မင်းကြီးညို ပြောတာသဘာဝ ကျတယ် အားလုံး ကို ချိန် ညှိရမယ် – တဘက်တည်းတင်/ချလို့မရဘူး